John Hellions on Flipboard
30 Flips | 8 Magazines | @JohnHellions | Keep up with John Hellions on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “John Hellions”
ဘန်ကောက် ဗုံးခွဲမှု အဓိက သံသယရှိသူသည် ထိုင်းမဟုတ်ဟု သက်သေတစ်ဦး ထွက်ဆို
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့တော်ရှိ ဧရာဝဏ် လေးမျက်နှာ နတ်ဘုရား ဗုံးခွဲမှုကို ကျူးလွန်ကြောင်း အဓိက သံသယရှိသူ အမျိုးသားသည် နိုင်ငံခြားသား …
Photos from Khin Mg Win's post
Photos from John Hellions's post
Branded Sales USA
COACH SALES 70% OFF ပြန်စနေပါပြီခင်ဗျာ.. အိတ် ၊ ခါးပတ်နဲ့ shoe ဖိနပ်တွေ ပြန်မှာလို့ရနေပါပြီ..
သောက်သုံးရေ ပြတ်လတ်မှု ကျေးရွာ ရာပေါင်း များစွာ တွင် ကြုံတွေ့နေရ ရေလွှမ်းမိုးဒဏ် ခံနေရသော ရာပေါင်းများစွာရှိသော ကျေးရွာများတွင် သောက်ရေသန့်များ ရရှိရန် ရေသန့်ဘူးများ၊ ကလိုရင်းအမှုန်များ၊ ရေသန့်စင်ဆေးပြားများ ဝေငှ နိူင်ရေး အပူတပြင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ရေကြီးမှု အပြင်းအထန်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သော စစ်ကိုင်း၊ ရခိုင်၊ မကွေး နှင့် ဧရာဝတီ တိုင်းတွင် သောက်ရေ၊ ချိုးရေ နှင့် လျှော်ဖွတ် ချက်ပြုတ်ရန် ရေသန့်များ လိုအပ်နေကြောင်း ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့များက ညည်းတွားလျက် ရှိနေကြသည်။ ရေကန် နှင့် ရေတွင်းများတွင် ၀င်ရောက်လျက်ရှိသော ရေဆိုးများကို အမြန် စုပ်ထုတ်၍ မိုးရေများ ဖြင့် သိုလှောင်နိူင်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ရခိုင်အစိုးရ အတွင်းဝန် ဦးတင်မောင်ဆွေက ဆိုသည်။ မကွေးတိုင်း ပွင့်ဖြူ တွင် ၀မ်းရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ ၃၀ ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း အတွင်းရှိ ကျေးရွာတရွာတွင် ၄၀ ဦး အား ၀မ်းရောဂါဖြင့် စတင် ကုသပေးလျက် ရှိနေရပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ အာဏာပိုင် များ နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး အေဂျင်စီများမှ ကန် နှင့် ရေတွင်း များမှ ရေဆိုးရေညစ်များကို အမြန်ဆုံး ရှင်းလင်းဖယ်ရှားလျက် ရှိနေကြသည်။ ညောင်တုန်း မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၂၀၀ နီးပါးတွင် သောက်စရာရေ လုံးဝပြတ်လပ်လျက်ရှိသည်ဟု ပြန်လည်နေရာချထားရေး စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဆိုသည်။ အလှုရှင်များ လာရောက်လှုဒါန်းသည့် သောက်ရေသန့်များကို သာ အားကိုးနေရကြောင်းလည်း ပြောပြခဲ့သည်။ ရည်ညွှန်း၊ ၊ Thomson Reuters FoundationံHSW
စွယ်စုံအနုပညာရှင် ဦးဝင်းဖေ၏ ကာတွန်းလက်ရာများ၊
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း<br>(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၉)ရက်နေ့ မွန်းလွဲ(၂း၀၀)နာရီအချိန် …